ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठक आज, सहभागी होलान् प्रधानन्यायाधीश? « AayoMail
ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठक आज, सहभागी होलान् प्रधानन्यायाधीश?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठक आज बस्दैछ। संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न आज बिहान ९ बजे ओलीले परिषदको बैठक बोलाएका छन्।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुखले सहभागी नहुने बताइसकेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशले के गर्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, बैठकमा सहभागी नहुन उनीमाथि चौतर्फी दबाब आइरहेको छ।
बैठकमा तीनजना मात्रै भए पनि निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा गरिएको छ। देउवा र सभामुख उपस्थित नभएपनि प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमात्र उपस्थित भएपनि कोरम पुग्ने छ। अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमलाई साथ दिँदै आएकाले उनी सहभागी हुने लगभग निश्चितजस्तै छ। प्रधानन्यायाधीशले के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहन्छन्। हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ।
यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुखलेसमेत भाग नलिने जनाएकाले उनले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रचण्डले बैठक संवैधानिक संरचनाको गरिमामा चुनौती थप्ने मनसायका साथ हुन लागेको जनाउँदै सहभागी नहुन संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यसँग अनुरोध पनि गरेका छन्।
देउवाले पनि संविधानको मूल मर्म विपरीत संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउँदै बैठकमा भाग नलिने बताइसेका छन्। ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आह्वान गर्दछु’, देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।